Taliyaha Qaybta 21-aad ee Ciidanka XDS oo soo kormeeray ciidamo tababar qaadanaya. | Dalka Times - News and Politics
Home WARKA Taliyaha Qaybta 21-aad ee Ciidanka XDS oo soo kormeeray ciidamo tababar qaadanaya.
Taliyaha Qaybta 21-aad ee Ciidanka XDS oo soo kormeeray ciidamo tababar qaadanaya.
Muqdisho:- Taliyaha Qaybta 21-aad ee Ciidanka Xooggga Gen: Maxamed Cadoow Cali “Sanka” oo ay Wehliyaan Saraakiil Ciidan oo uu ka mid yahay G/le Sare Cabdulahi Maxamed Muuse (kayse) Xeer ilaaliyaha Maxkamada Ciidamada Qalabka Sida ee Qaybta 21-aad, ayaa kormeer ku gaarey Dugsiga Aruuris ee Deegaanka Xananbuurre, halkaa oo ay ku jiraan Ciidamo in mudo ahba uu u socdey tababar Sare oo lagu barayay Xirfadaha Ciidanka.
Gen: Maxamed Cadoow Cali “Sanka” Taliyaha Qaybta 21-aad ee Ciidanka Xooggga oo Ciidamadan la hadley ayaa ku bogaadiyay sida ay u xusheen in ay u adeegaan qarankooda, isla markaana diyaarka ugu yihiin ka gudbida tababarka u socda oo ah mid Sare.
Sidoo kale, taliyaha ayaa ciidamada ku bogaadiyay dagaal adag ee ay kula jiraan maleeshiyada Al-Shabaab, kuwaas oo ku dhuumaleysanayay deegaanada howdka halkaasina ku dhibaateeya shacabka, xoolo baad ahna ka qaata.